Pinterest ingaratidzika semukana webhizimusi iro rinofanirwa kuruka ruzhinji rwevashandisi vebhizinesi. Kupfuura zvese, zvinongova a mufananidzo wakavakirwa pachikuva izvo zvinogona chete kukwezva avo vanofarira art, fashoni, kana chikafu, handizvo? Izvi hazvigone kupfuurira mberi kubva pachokwadi. Yako bhizinesi Pinterest account ndeye yakakosha sosi imwe sarudzo yemahara kune vatengesi vari kutsvaga kukwikwidza kune vavanoda demographics.
Pane zvinhu zvakati kuti zvaunogona kuita nePinterest yako kuti iite zvakanyanya, uye zvimwe zvezvinhu izvi zvinogona kuitwa muawa chete!
Sei ndichida Pinterest yebhizinesi rangu?
Pinterest inokurumidza kukurumidza chikuva icho gore-pamusoro-gore chinowedzera charo chekushandisa pakati pevose varume nevakadzi. Pinterest ndeye stereotypically yakabatana nevakadzi, izvo zvinonzwisisika kubvira ipapo ndiyo yekutanga base base base. Nekudaro, 40% ye new musina kusaina varume. Izvi zvinoratidza kuti nzira iyi yemagariro enhau iri kuwedzera. Ehe, mifananidzo-inoshamwaridzana nemagariro haingori ye Instagram futi. Pane zvinhu zvakati kuti zvaunogona kuita nePinterest yako kuti iite zvakanyanya, uye zvimwe zvezvinhu izvi zvinogona kuitwa muawa chete!
Pinterest zvakare ndeimwe yemapuraneti anokurumidza kuwana mari kunze uko. Shopify yakabatana naPinterest kuunganidza data nezve maitiro ekutenga zvigadzirwa zvevashandisi vePinterest. Vakawana kuti 96% yevashandisi vePinterest vanovimba nePinterest kuunganidza ruzivo rwechigadzirwa, 93% chirongwa chekutenga uchishandisa Pinterest, uye yega yega yekutenga iyi inodhura $ 50. Mari yese iyi inogona kunge ichitsvedza kuburikidza neminwe yako kana ukasarudza kusashandisa Pinterest.
1. Wedzera yako logo kune yako bhizinesi Pinterest account
Kuisa bhizinesi rako Pinterest account ndiyo yekutanga nhanho muchiitwa ichi. Kana iwe ukava bhizinesi rakasimbiswa kuburikidza nePinterest, izvi zvinogona kuwedzera kunaka kwakawanda uye kuvimba munharaunda. Kwete chete izvi zvinogona kuwedzera kunaka uye kuvimba, asi zvinogona kupa mikana isingawanike mumunhu Pinterest account. Inonyanya kukosha yemikana iyi ndeye Rich Pini. Aya maPini anogona kupa ruzivo nezve chako chigadzirwa muPini.
Kuwedzera logo semufananidzo mune yako profiles kunogonawo kuwedzera mweya wechokwadi kune yako Pinterest machira. Kana iwe uchida logo, pane zvakawanda zvishandiso zvinogona kukubatsira iwe kuvaka logo. Ndakagara pachangu ndakasaririra Canva nekuda kwavo raibhurari yematemplate kukutanga. Nekudaro, pane zvimwe zvishandiso zvinogona kubatsira munhandare iyi. Paunenge uchinge wagadzirwa logo yako, unogona kushandisa iyo matanho ayo Pinterest akapa kuti uwedzere izvi pafaira yako.
2. Ita shuwa kuti mapini ako ese anoshanda uye anoshanda
Ichi chingangodaro chakanyanya kukosha cheketi yekuita zvese. Mushure mezvose, yako Pinterest account ingangodaro isingabatsiri zvakanyanya kana ikasatungamira kudzokera kune zvinoshanda zvemukati. Zvinotyisa, VentureBeat inoshuma kuti 50% yepamusoro yezvipinha paPinterest batanidza kudzoka kune zvakambopererwa Izvo hazvichashandi!
Kune akati wandei zvishandiso kunze uko zvinogona kubatsira kuita cheki iyi. Unogona kutanga neBoardbooster's Pin Chiremba. Ivo vanoda chirongwa chemwedzi uye ivo vanozobvunzawo kuti iwe ubhadhare paPin yaunotarisa, zvisinei, iyi ndiyo yekukurumidza nzira yekuita kuti bhizinesi rako Pinterest riite sezvarinogona kuitwa. Pin4Ever inopawo an yakanakira Suite yezvishandiso izvo kwete chete zvinotsigira yako Pinterest, asi zvakare zvinotarisa mashandiro ePini dzako.
Kana iwe uchida kudzivirira kubhadhara kune aya macheki, iwe unogona kuita zvimwe zvinyorwa zveodha zvinokubatsira iwe kutarisa izvi zvinongedzo. Kupopota SEO Spider chishandiso ichakubatsira kuti utarise marata ako nemaoko. Iwe unogona zvakare kushandisa a broken link checker kuve nechokwadi chekuti ma link ako anoshanda.
3. Wedzera bhatani rekutevera Pinterest kune webhusaiti yako
Nzira yakanaka yekubatanidza bhizinesi rako Pinterest account kumberi uye pakati ndeye gadzira rinotevera bhatani kana Widget kune yako webhusaiti. Aya mabhatani anokwanisa kubatanidza zvakananga muPinterest yako profil uye kubatsira vashandisi vako kuti vatevedze izvo zvinoenderana chaizvo nezvavari kuverenga. Kana ivo vachiona izvi zvinongedzo pane yako webhusaiti, uri kuisa yakananga pombi kune vashandisi vako iyo inogona kuvapa zvese zvavanoda kuti vazive nezvebhizinesi rako.
Zvakare, kana iwe uine RSS Feed iyo inogadzirwa newebhusaiti yako, unogona kubatanidza izvi zvakananga kune yako dlvr.it account kuitira kuti zvemukati zviratidzirwe zvakazara kune yako Pinterest account. Iyi sarudzo ichakubatsira iwe kugadzirisa yako Pinterest kushambadzira kwe misi nenguva uye nenguva.
4. Wedzera mazwi ako akakosha kuPinterest username yako
Aya mazano ane chekuita neSEO. Wako Search Engine Optimization zvinoenderana nekukwanisa kwako kugadzira mazwi ako anodiwa pamberi uye pakati mune zvako zvemukati. Kuti uve chiremera cheGoogle pane chidzidzo, kuisa iyi keyword kumberi uye pakati muzita rako kwakakosha pakuve nechokwadi chekuti Google inotora izvi. Zviri nyore kwazvo kuti Google iwane chinyorwa kana chakaiswa mukati memusoro mune webhusaiti, uye kuisa iwo mazwi akakosha mumusoro wako ari kuita izvozvo chaizvo.
5. Kurudzira yako Pinterest mabhodhi pa Facebook, Twitter uye ese ako midhiya enhau mapeji
Nei ndaizoda kushandisa yangu mamwe midhiya midhiya zvinhu? Kuti uwedzere kukurudzira ako ese ma media media account, unofanirwa kufunga kuti ese anogona kubatanidzwa pamwechete. Akako mamwe ma media media account anogona kubatsirwa kubva kune yako SEO inoitwa kubva kune maPini ako. Yese yebhizinesi rako Pinterest yezvinyorwa inogona kutungamira kumashure kune zvako zvimwe zvemukati pane ako ma media media account. Kuti zvive izvo, kubatanidza ako ma media media account kune mumwe nemumwe kunogona chete kukubatsira iwe.
Asi kutumira pini yega yega kune ako mamwe mapeji ezvemagariro evanhu uye maprofayli anogona kunge achirwadza, kunyanya kana uine nguva shoma.
Kana iwe uri kutsvaga kuchengetedza nguva, edza dlvr.it's media media automation sevhisi yekuedza kugovera mapini ako kune ako Facebook mapeji, Twitter mbiri uye zvimwe. Ingobatanidza Pinterest board kune dlvr.it uye wedzera yako midhiya mapeji mapeji uye profiles. dlvr.it inonyatsoisa mapepa ako matsva pamapeji ako ezvenhau.
Ini ndinobatanidza sei Pinterest kune angu mamwe ma media media account?
dlvr.it inopa dzakawanda sarudzo yekubatanidza yako zvemukati zvakananga kune yako Pinterest account pamwe nemamwe akawanda maSocial. Pinterest inongotaura kuti iwe unogona kubatanidza zvakananga yako Facebook ne Twitter, nepo dlvr.it inopa iyo sarudzo yekutumira zvirimo panguva imwe chete kuTumblr, LinkedIn, LinkedIn Makambani mapeji, nezvimwe.
Chimwe chikonzero chikuru chekushandisa sevhisi s dvvr.it kubatanidza zvemukati wako Social Media account ndeyekuti zviri mukati zvioneke zvakanyanya Curated. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uine RSS Feed iyo inokodzera zvakanyanya Pinterest, Twitter, uye Facebook, asi mamwe maFeed ako anogona kungokodzera Pinterest ne Facebook, unenge uchishambadza zvako zvirimo kune yakakodzera Social Media chiteshi.
Kana, zvakadaro, iwe uchida kuita izvi kuburikidza nePinterest, Pinterest akagadzira chidzidzo chekukubatsira iwe wedzera yako bhizinesi Pinterest account kune yako Facebook uye Twitter account.
Kana iwe ukawana imwe imwezve nguva mushure mekupfupfaidza kuburikidza neyeReggreen yezviri, tora imwe nguva yekupindura paPini dzevamwe dzinosunga mukati mezvako. Izvo zvichabatsira kutungamira vangangove vateveri kudzoka pane zvako zvemukati.
Kuti ushandise iyo yemuchinjiro-wekutumira yezvino blog mablogiki kuPinterest, edza dlvr.it's media media automation service.
6. Nyorazve zvimwe zveOvergreen Zvemukati
Pinterest achangobva kuburitsa tambo yezvavanofunga zvakakosha kufunga kana vachishandisa chikuva chavo. Chimwe chezvinhu zvakakosha zvekufungidzira kwavo kuti ibudirire kuburitsa Evergreen yezvinhu. Kusiyana nemamwe mapuratifomu, Evergreen yezvinyorwa zvakakosha kuti Pinterest ibudirire.
Izvo zvikonzero zveReggreen zvemukati kuve pamberi pehurongwa hwako hwarara mune izvo zvemukati. Nechisikigo, Pinterest zvemukati zvakatenderedza zvachose, uye nekuda kweizvi, zvemukati zvako zvinofanirwa kukodzera kune vese vateereri kwenguva yakareba. Zvinhu zvakaita semadzidzis, infographics, uye maresitoreti anogara nekusingaperi uye Pinterest achave nechokwadi kuti anowanikwa.
dlvr.it's Yakumbirwa service inobatsira iwe kunyorazve pasi peiyo Evergreen yezvinyorwa zvaunowana zvinonyanya kufadza. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuendesa izvo zvirimo zvaunoda kuti zvinyorwe zvakare, isa yako Pinterest account kunyore-pini, uye wobva watendera dlvr.it kuita zvimwe zvese! Iyi sevhisi inodonhedza pasi panguva iyo iwe yaunoshandisa ku-nyora zvakare mberi.
Ndinofanira sei kusarudza yangu yeAggreen yemukati?
Kutsvaga yako inonyanya kufarirwa zvemukati ndiko kutanga kukuru kwekutsvaga yako yepamusoro yeOvergreen yezvinhu. Paunenge iwe wawana zvakakurumbira zvemukati, iwe unogona kuziva zvakanyanya kukodzera zvemukati. Kutanga nezvakanyanya izvo zvinoenderana zvakanyanya. Sezvo zviri zvemukati mako, iwe ungangodaro uchizviziva zvakanyanya. Tsvaga iwo zvidimbu zvemukati izvo zvichave zvakanyanya zvisingaperi nguva. "How-tos" uye tutorials ndiye anonyanya Pinterest-ane hushamwari zvemukati.
Paunogadzira blog nyowani post, govana yako yakavezwa mufananidzo uye chinongedzo kune yako Pinterest peji. Tora mukana wevazhinji vateereri vePinterest kusimudzira yako blog. Zviri nyore kupinza yako blog nyowani peji peji kune yako Pinterest bhodhi - ive shuwa yekushandisa inoratidzika uye inomanikidza inoratidzwa ficha ne positi yako kubata kubata kwevateereri vako Pinterest.
7. Dzima kuvanzika kwenjini yako yekutsvaga
Sei ndaizoda kudzima yangu yekutsvaga injini yekuvanzika? Muchidimbu, ichi chekuvanzika chine mukana wekuchinja mutambo mune yako Pinterest traffic. Iyo yekutsvaga injini yekuchengetedza zvakavanzika inoshanda mabasa ekudzivirira vanhu kubva pakuwana zvirimo zvako paGoogle. Pinterest iyi yakasarudzika midhiya yenhare pachikuva mune iyo inobvumira maPini ako kuve ekutsvaga kweGoogle. Nekuti izvi ndozvazviri, kana ichi chekuvanzika chakavhurwa, urikukanda traffic iri inogona kubva kuGoogle.
Mukukosha, traffic iyo inouya kubva kuGoogle ndiyo inonyanya kukosha traffic iyo ine mukana wekudzoreredzwa. Nekuti Google inoshandisa Pinterest kuzadza mizhinji yekutsvaga mhinduro, unogona kuba iyi traffic izvozvi kubva pasi pevaikwikwidza.
Ndinga dzima sei injini yekutsvagira nzvimbo muPinterest?
Kuzima mamiriro aya hakugone kuve nyore. Pinterest yaita dzidzo izvo zvichakubatsira iwe pakarepo kuvhura pachako muGoogle yekutsvaga injini.
Kana iwe ukazviwana iwe uine zvishoma zvishoma zveimwe nguva mukati mevhiki, iwe unogona kusimbisa yako yekutsvaga injini yekuchena. Nzira yakanakisa yekuita izvi ndeyekushandisa yekutsvaga injini optimization mudziyo. Kushandisa zvishandiso izvi kunogona kubatsira kuti utore mazwi akakosha ezvakanakira zvido zvekambani yako. Izvi zvinogona kubatsira kukwira kumusoro Mapini ako kumusoro kune mhinduro dzeGoogle. Tarisa yedu blog bvunzo iyo ichakubatsira iwe kuwana iyo yakanakisa yekutsvagisa injini dzekushandisa.
8. Ita shuwa kuti wapedza mbiri yako
Nei ndaizoda kupedza nhoroondo yangu? Mufananidzo hauna kukwana here? Munzira dzakawanda, aiwa. Kusiri kupedza mbiri yako kunoita kuti uite sousimbe uye usinakirwe mukufambiswa kwemhepo. Haisi chete iyi imwe mukana wekuita fungidziro, asi iri imwe mukana weSEO. Iwe unofanirwa kufunga nezvePinterest semushini weSEO kuti uite mari yezvinhu zvaunoda. Iyo puratifomu inongoshanda iwe chete kana iwe ukaisa yako kushanda mukati mayo.
Paunorangarira kuti Pinterest inzvimbo yakanangana neGoogle, iwe unonzwisisa kuti izwi rega rawakaisa muPinterest rakakosha. Zvinhu zvese Pinterest zvinodyisa mune yako SEO zvakananga, uye nekudaro, yako nhoroondo yakakosha zvakanyanya kuita kuti iite pfungwa yekuti iwe unoda pane yako bhizinesi Pinterest account.
9 Rodha mabhodhi ako kuti ave akashinga uye ehunyanzvi
Kureurazve mabhodhi ako kunogona kubatsira kuvandudza SEO yako zvakanyanya. Kune chikoro chekufunga icho chinoodza zita rekuti Pinterest mabhodhi, zvisinei, kana iwe uchinge uchinetseka nezvako Google mhinduro, iyo chete mirayiridzo yaunogona kuenda ndeye kumusoro. Chero bedzi iwe uchingosara pane imwe nyaya neyakatarisana neyako chikamu, yako SEO ichangovandudza. Iwe haugone kubhadhara kuti usachinje aya mazita kana iwe usina kugadziriswa pakutsvaga kweinjini mhinduro.
Ndinoitazve sei mabhodhi angu?
Iyi ndeimwe inokurumidza uye yakapusa chinja kumabhodhi ako ePinterest. Iyo ingori nyaya yekuwana iyo yekugadzirisa pane uye nekuchinja zita rebhodhi.
10. Shandisa Pini inozivikanwa sePikicha yako yemukati
Sei kushandisa Pin yakakurumbira kuchikosha kune yako bhodhi? Ichi chifukidziro chifananidzo chekutanga icho iwe chaunogona kuita nevashandisi vako. Iyo 800 x 800 pixel nzvimbo yekuburitsa izvo chaizvo izvo vashandisi vako vangatarisira mumabhodhi ako. Izvi zvinopa iwe mukana wekumisa yako yekumaka pamberi uye yepakati mune yega bhodhi uye ita fungidziro nezvese zvaunazvo mumabhodhi ako.
Chikonzero chakanakisa chekushandisa izvi ndechekuti zvinoshamisa underutilized. Mufananidzo wekuvhara iri kufungidzira kuti vashandisi vako vanoona zvakare chiratidzo chekutanga. Uku kwekutanga kufungidzira kunogona kutungamira kune vateveri ekuwedzera vePinterest yako mabhodhi, uye nekudaro, shandura yakawanda traffic kune mari kune ako zvigadzirwa uye masevhisi.
img source: yakarohwa kicheni Pinterest
Ini ndinoshandura sei Pini yeangu chifukidziro chifananidzo?
Izvi zvakare a nekukurumidza uye nyore maitiro. Vanoshandisa Bhizinesi Pinterest vanoshandisa yakawanda yenguva yavo kuwana yakanyanya kukosha Pini yekushandisa, asi ini ndinokurudzira kushandisa yakakurumbira Pin mune iro bhodhi. Mhinduro yemushandisi muchimiro chePini uye maonero ndiyo ruzivo rwakakosha iwe rwaunogona kushandisa kuti uone zviri mukati iwe zvaunoda seyekufungidzira kusingaperi.
Pinterest chishandiso chinogona kupa hwakawanda nzwisiso mubhizinesi rako, uye kushandura yakawanda mari kwauri.
Kuuya nazvo pamwechete
Pinterest chishandiso chinogona kupa hwakawanda nzwisiso mubhizinesi rako, uye kushandura yakawanda mari kwauri. Iyo yakananga yekutengesa chikuva iyo yakaratidza kuve yakanyanya kukosha. Nekuisa shoma shoma yenguva uye kushanda mubhizimusi rako Pinterest account, unogona kushandura vateveri vako kuti vave vatengi. Ichi chishandiso chakanyanyisa kukosha kuti uregerere, uye hachisati chiri chevanyengeri zvakare.
The post Nzira yekushandisa Pinterest yeBhizinesi - Simbisa Pinterest Marketing yako Pasi peawa yakatanga kutanga dlvr.it | blog.
11 Yemagariro Media Makarenda, Zvishandiso, uye Matemplate ekuronga Zvemukati